Farriinta Madaxweyne Farmaajo ee 14 October. | Somsoon
Home ARAGTIDA Farriinta Madaxweyne Farmaajo ee 14 October.
Farriinta Madaxweyne Farmaajo ee 14 October.
Article horeMareyknaka oo cunaqabateen dhaqaale saaraya dowladda Turkiga.
Article socoda Cumar Filish: “Halku dhigga sanadkaan waa ma ooynee waan aarsanaa”